Mattis: Dagaal waa musiibo, diblomaasiyaddana lagama quusan - BBC News Somali
Mattis: Dagaal waa musiibo, diblomaasiyaddana lagama quusan
Wasiirka gaashandhigga Marykanka
Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka, James Mattis, ayaa sheegay in diblomaasiyaddu weli hormood u tahay dedaalka Maraykanku ku doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka dhalatay barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Woqooyi isla markaana ay yididiilo ay muuqato.
Waxa kale oo uu sheegay in dagaal dhacaa tahay masiibo laakiin talaabo milatari loo diyaar yahay hadii ay ka fursan waydo.
Hadalkiisani wuxu lid ku yahay hadal uu hore Madaxweyne Trump u sheegay oo ahaa in 'Kuuriyada Woqooyi farta wadnaha saarto' hadii ay hirgeliso qorsheyaasha ay ku damacsantahay in ay ku riddo gantaalo khatar ku ah dhulka Maraykanka.
Shiinaha oo ah dal ay aad gacansaar u leeyihiin Kuuriyada Woqooyi, ayaa wargeyska dawladda ee Global Times la yidhaa wuxu ku waramay in Beijing arintaa dhex ka ahaan doonto hadii Pyongyang qaaddo weerar noocaas ah oo Maraykankuna ka falceliyo.
Laakiin wargeysku wuxu sheegay in hadii Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed weeraraan Kuuriyada Woqooyi si ay dawladda jirta u ridaan, in Shiinaha ay khasab ku noqon doonto in uu arintaa ka hor tago.